မျက်နှာ ခွဲစိပ် ပြုပြင်ထား တယ် လို့ ဝေဖန် စွပ်စွဲခြင်းခံ လိုက်ရတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဆောင်းဝတ်ရည်မေ – Ever Best
မျက်နှာ ခွဲစိပ် ပြုပြင်ထား တယ် လို့ ဝေဖန် စွပ်စွဲခြင်းခံ လိုက်ရတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဆောင်းဝတ်ရည်မေ
By Ever BestPosted on December 3, 2020
ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ အခိုင်အမာ နေရာ ယူထားနိုင် ခဲ့သူလေး ဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဆောင်းဝတ်ရည်မေ က တော့ “ဝိညဉ်ရှိုက်သံ”ဇာတ်လမ်း တွဲနှင့် ‘အမုန်းမှသည်’ ဇာတ်လမ်းတွဲများတွင် မတူတဲ့ ကာရိုက်တာ တွေနဲ့ ပီပြင်စွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို သိမ်းယူခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်။
လက်ရှိမှာလည်း သူမဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာ အလုပ်တွေ ကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ရင်း ပရိသတ်တွေ အတွက် မရိုးနိုင် တဲ့ ကာရိုက်တာ တွေမှာ သရုပ်ဆောင် ဖို့ ကြိုးစားနေသူလေး တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သွယ်လျလှပ လွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေး ကို ပိုင်ဆိုင်ထား တဲ့ ဆောင်းဝတ်ရည်မေ ကတော့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက် ပီပီ အောင်မြင်လာရင် ဝေဖန်တိုက် ခိုက်မှုတွေ ရှိလာနေခဲ့ပါပြီ။ သူမရဲ့ သဘာဝ အတိုင်း ရှင်းသန့်တဲ့ ပင်ကို မျက်နှာလေး အား အစားထိုး ပြုပြင်ခဲ့ တာ ဖြစ်တယ်လို့ တိုက်ခိုက်ဝေဖန် သူတစ်ဦး က ပြောဆို မှတ်ချက် ပေးလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
အဆိုပါ လူက ဆောင်းဝတ်ရည်မေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ အောက်မှာ “မေးစေ့ Vshape လုပ် နှူတ်ခမ်း filler ထိုး.. Original face- Am Iajoke to you ? :”) Your birth face was already perfect ပါ။ Filler and some treatments are not needed for you (မူလမျက်နှာ – ငါမင်းကိုဟာသလား။ :”) သင်၏မွေးဖွားခြင်း သည်ပြီးပြည့် စုံခဲ့သည်။ Filler နှင့် ကုသမှု အချို့သင့် အတွက်မလို အပ်ပါ) ဆိုပြီး မှတ်ချက်ပြု ဝေဖန်ရေးသားထားခဲ့တာပါ။
ထိုသူ၏ ဝေဖန် ပြောဆို စွပ်စွဲခဲ့သည် နှင့် ပက်သတ်ပြီး ဆောင်းဝတ်ရည်မေ က ‘ သေချာကြည့်ပြီ းမှ မသိပဲ ရမ်းသမ်းမပြော နဲ့ ၊ မသိပဲလာ ပြောရင် ဟာသ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မ က ကျွန်မ မျက်နှာပြင် ထားပါတယ်လို့ ပြောထားမိ လို့ ဒီလို စကားတွေလာ ပြောနေ ရတာလား ပြောချင်ရင် မျက်နှာ ကို ဟိုပြင် ဒီပြင်လုပ်ထား တဲ့သူတွေ ရဲ့ ပုံအောက် ပဲ အဲ့လို သွားရေးပြီး ဆရာလုပ်လိုက်နော်’ ဆိုပြီး တုံ့ပြန်ရေးသား ခဲ့ ပါတယ်။
Previous post ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး အလုံး(၇၉၀)ရောက်ရှိပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ဒီဇင်ဘာ၃ ရက်နေ့ မှ စတင် လှူဒါန်းသွားမည့် ဂျွန်လွင်
Next post တင်းရင်း မို့မောက် လျံထွက်နေ တဲ့ ပုံလေးတွေ တင်ပေးလိုက် တဲ့ ချောကလျာ